Ndị na-eme mkpọtụ na-agbatị agbatị na Merry Little Christmas - Thrilltalk.com
Home/Nieuws/Efteling designer jury so na Merry Little Christmas
0 18 Nkeji 1
Ihe omume ohuru abuo di na Wednesde abuo tupu ekeresimesi Adịkwa obere Christmas enwere ike ihu na RTL 4. N’egwuregwu egwuregwu a na-atọ ụtọ, e nyere ndị na-ewu obere ọrụ ọrụ iwu obodo mara mma nke mara mma nke ekeresimesi. Kedu di na nwunye ga-enwe mmeri?
Nkeji 17 gara aga
A ga-ekpebi obodo ndị a ga-eme ekeresimesi site na mmadụ atọ nwere ndị ọka iwu ọkachamara. Otu n'ime ndị juri ahụ bụ Sander de Bruijn, na-edu onye mmebe na Na-agbatị. Ya na ndị otu ya haziri 'Raveleijn', 'Baron 1898' na 'Symbolica'. A kpọrọ ndị otu aha ya "Dutch Designer of the Year" na 2020. Ndị ọzọ so na juri bụ Loretta Schrijver na Stuart Bolk. Ihe ngosi nke usoro ihe omume di n'aka Robert iri Brink.
A ga-ebu ụzọ gosi mmemme ahụ Martijn Krabbé mana nke a nwalere ezigbo ihe maka corona n'oge agbapụ. A na-etinye mmemme ahụ na ya Nnukwu ụlọ nkwari akụ ka ọnwa Nọvemba. Adịkwa obere Christmas a ga-agbasa na ngosipụta abụọ na RTL4 ma nwee ike ịhụ na Wednesde 16 na 23 Disemba site na 20.30 pm.
Baron 1898 Nnukwu ụlọ nkwari akụ Onye mmebe efteling Obodo ekeresimesi Martijn Krabbé Adịkwa obere ekeresimesi Robert iri Brink Sander de Bruijn Ihe atụ
Inetlọ ọrụ ga-emechi ogige ntụrụndụ na zoo
You bụ onye nduzi nke ogige ntụrụndụ ọhụrụ?
XB-1: N'ime awa abụọ site na London ruo New York na 2030
Polka Marina ga akwụsị ụgbọ mmiri ma taa
Ezumike ezumike ga-agbasa Wickieland na ebe nkiri ọhụrụ
Toverland nwere nkwekọrịta na Black Friday